Fahatsiarovana - www.yomelijah.com
Ny "rohy" nosoratana amin'ny teny Frantsay, mitarika anao amin'ny lahatsoratra amin'ny teny Frantsay. Amin'ity tranga ity dia afaka misafidy amin'ny fiteny hafa koa ianao: Anglisy, Espaniola, Portiogey
Voarara ao amin'ny Baiboly
Fahatsiarovana ny fahafatesan'i Jesoa Kristy
"Fa efa natao sorona tokoa i Kristy, izay toy ny zanak’ondrin’ny Paska"
(1 Korintiana 5:7)
Ny datin'ny fahatsiarovana ny fahafatesan'i Jesosy Kristy dia ny talata 12 aprily 2022, aorian'ny filentehan'ny masoandro
Ahoana no fomba kajy io daty io?
Azonao atao ny mijery fanazavana antsipirihany
eto ambany amin'ireo fiteny eto ambany:
- Ny Paska dia modely amin'ireo fepetra masina takin'ny fankalazana ny fahatsiarovana ny fahafatesan'i Kristy: "Fa aloky ny zavatra ho avy ireny, fa ny tena izy dia an’i Kristy" (Kolosianina 2:17). "Koa satria aloky ny zavatra tsara ho avy ny Lalàna fa tsy ny tena izy" (Hebreo 10:1).
- Ny voafora ihany no afaka mankalaza ny Paska: "Koa amin’ny takarivan’ny andro fahefatra ambin’ny folon’ny volana voalohany, dia hihinana mofo tsy misy lalivay ianareo hatramin’ny takarivan’ny andro fahiraika amby roapolon’io volana io" (Eksodosy 12:48).
- Tsy adidin'ny Kristianina ny famorana ara-batana. Ny famorana dia ho tonga ara-panahy: "Koa forao ny fonareo, ary aza manamafy hatoka intsony" (Deoteronomia 10:16, Asa 15: 19,20,28,29 "Didim-panjakana apôstôly", Romana 10: 4 "Fa Kristy no faran’ny Lalàna" (nomena an'i Mosesy)).
- Ny famorana ara-panahy ao am-po dia midika ho fankatoavana an'Andriamanitra sy i Jesoa Kristy zanany: "Rehefa mitandrina ny lalàna ihany ianao vao mahasoa anao ny famorana. Fa raha mpandika lalàna kosa ianao, dia manjary tsy voafora indray ianao izay efa voafora io. 26 Koa raha mitandrina ny zavatra ara-drariny takin’ny Lalàna ny olona tsy mifora, tsy efa anisan’ny voafora ihany ve izy na dia tsy mifora aza? Ary ny tsy mifora izay manatanteraka ny Lalàna, dia hanameloka anao izay mpandika lalàna na dia manana ny fehezan-dalàna an-tsoratra aza ianao sady voafora. Fa tsy izay miseho etỳ ivelany no maha Jiosy ny olona iray, ary tsy ny famorana azy eo amin’ny nofo no maha voafora azy. Fa ny ao anaty no maha Jiosy azy, ary voafora fo izy ka ny fanahy no namorana azy, fa tsy ny fehezan-dalàna an-tsoratra. Koa tsy avy amin’ny olona, fa avy amin’Andriamanitra, ny fiderana izany olona izany (Romana 2: 25-29) (Les enseignements bibliques).
- Ny tsy voafora ara-panahy dia maneho ny tsy fankatoavana an 'Andriamanitra sy Jesoa Kristy: "Ry mafy hatoka, tsy voafora fo sy sofina! Manohitra ny fanahy masina foana ianareo. Ary tahaka ny nataon’ny razanareo ihany no ataonareo koa. Iza moa no mpaminany tsy nenjehin’ny razanareo? Eny, novonoiny mihitsy aza ireo nanambara mialoha fa ho avy Ilay marina. Ary ankehitriny dia efa tonga mpamadika sy mpamono azy ianareo. Ianareo no nandray ny Lalàna nampitain’ny anjely, nefa tsy nitandrina izany" (Asa 7: 51-53) (Les enseignements bibliques (Ce que la Bible interdit)).
- Ny famorana ara-panahy ny fo dia takiana amin'ny fandraisana anjara amin'ny fankalazana ny fahafatesan'i Kristy (na inona na inona fanantenana kristiana (any an-danitra na ety an-tany): "Aoka ny olona handini-tena tsara aloha raha mendrika, vao hihinana amin’ny mofo sy hisotro amin’ny kaopy" (1 Korintiana 11:28).
- Ny kristiana dia tokony handinika ny feon'ny fieritreretana alohan'ny fandraisana anjara amin'ny fankalazana ny fahafatesan'i Kristy. Raha mihevitra izy fa manana feon'ny fieritreretana madio eo anatrehan'Andriamanitra, ary manana ny famorana ara-panahy, dia afaka mandray anjara amin'ny fankalazana ny fahafatesan'i Kristy izy (na inona na inona fanantenana kristiana (any an-danitra na ety an-tany) (La résurrection céleste; La résurrection terrestre; La Grande Foule; La libération).
- Ny didy mazava amin'i Kristy, ny mihinana an'ohatra amin'ny "nofony" sy ny "rany", dia fanasana ho an'ny Kristianina mahatoky rehetra hihinana "mofo tsy misy masirasira", misolo tena ny "nofony" sy hisotro amin'ny ny kaopy, misolo tena ny "rany": "Izaho no mofon’aina. Nihinana ny mana ny razanareo tany an-tany efitra, nefa maty ihany. Ity kosa no mofo nidina avy any an-danitra mba ho afaka hihinana azy ny olona, ka tsy ho faty. Izaho no mofo velona izay nidina avy any an-danitra. Raha misy mihinana an’ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary ny mofo izay homeko dia ny nofoko ho fiainan’izao tontolo izao.” Dia nifanditra ny Jiosy, ka nanao hoe: “Hataon’io lehilahy io ahoana ny hanome ny nofony hohanintsika?” Koa hoy i Jesosy: “Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa raha tsy mihinana ny nofon’ny Zanak’olona sy misotro ny rany ianareo, dia tsy manana fiainana ao anatinareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako dia manana fiainana mandrakizay, ary izaho hanangana azy amin’ny maty amin’ny andro farany. Fa tena sakafo ny nofoko, ary tena fisotro ny rako. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako dia tafaray foana amiko, ary izaho koa tafaray aminy. Velona ny Ray izay naniraka ahy, ary velona aho noho ny Ray. Dia toy izany koa izay mihinana ahy, ho velona izy noho ny amiko. Ity no mofo nidina avy any an-danitra. Tsy tahaka ny razanareo izay nihinana nefa maty ihany, fa izay mihinana ity mofo ity kosa dia ho velona mandrakizay" (Jaona 6:48-58) (Jésus-Christ le seul chemin).
- Noho izany, ny Kristianina mahatoky, na inona na inona fanantenan'izy ireo, any an-danitra na ety an-tany, dia tsy maintsy mandray ny mofo sy ny divay amin'ny fankalazana ny fahafatesan'i Kristy, didy avy amin'i Kristy izany: "Koa hoy i Jesosy: “Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa raha tsy mihinana ny nofon’ny Zanak’olona sy misotro ny rany ianareo, dia tsy manana fiainana ao anatinareo. (...) Velona ny Ray izay naniraka ahy, ary velona aho noho ny Ray. Dia toy izany koa izay mihinana ahy, ho velona izy noho ny amiko" (Jaona 6:53,57).
- Ny fankalazana ny fahafatesan'i Kristy dia tsy tokony hankalazaina afa-tsy eo amin'ireo mpanara-dia mahatoky an'i Kristy: "Koa rehefa mivory mba hihinana izany ianareo, ry rahalahiko, dia aoka hifampiandry" (1 Korintianina 11:33) (Adoration à Jéhovah en congrégation).
Raha te handray anjara amin'ny fahatsiarovana, ny fahafatesan'i Kristy ary tsy Kristianina ianao dia tsy maintsy atao batisa ianao, maniry an-tsitrapo hankatò ny didin'i Kristy: "Koa mandehana àry, ataovy mpianatra ny olona any amin’ny firenena rehetra, ka ataovy batisa amin’ny anaran’ny Ray sy amin’ny anaran’ny Zanaka ary amin’ny anaran’ny fanahy masina. Ampianaro izy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo. Ary homba anareo foana aho, mandra-pahatongan’ny fifaranan’ny rafitr’ity tontolo ity" (Matio 28:19,20) (Baptême).
Ahoana no hankalazana ny fahatsiarovana ny fahafatesan'i Jesoa Kristy?
"Ataovy hatrany izao ho fahatsiarovana ahy"
Taorian'ny fankalazana ny Paska, i Jesoa Kristy dia nametraka ny lamina ho fankalazana ny amin'ny fahatsiarovana ny fahafatesany (Lioka 22: 12-18). Izy ireo dia ao amin'ireo andinin-tsoratra masina ara-Baiboly, evanjelika:
Matio 26: 17-35.
Marka 14: 12-31.
Lioka 22: 7-38.
Jaona toko faha-13 ka hatramin'ny faha-17.
Nanome lesona tamin'ny fanetren-tena i Jesoa, nanasa ny tongotry ny mpianany (Jaona 13: 4-20). Na izany aza, ity hetsika ity dia tsy tokony heverina ho fombafomba hampihetsika alohan'ny fahatsiarovana (ampitahao amin'ny Jaona 13:10 sy Matio 15: 1-11). Ny tantara dia mampahafantatra antsika fa taorian'io, dia "nametraka ny akanjony ivelany" i Jesoa Kristy. Koa tsy maintsy manao akanjo tsara isika (Jaona 13: 10a, 12 ampitahao amin'ny Matio 22: 11-13). Raha ny lalana, teo amin'ny toerana namonoana an'i Jesosy Kristy, dia nesorin'ireo miaramila ireo akanjo izay niarahany tamin'io hariva io. Ny tantara ao amin'ny Jaona 19: 23,24: "Rehefa voafantsiky ny miaramila tamin’ny hazo fijaliana i Jesosy, dia nalain’ireo ny akanjony ivelany ary nozarainy efatra ka samy nahazo tsirairay avy izy ireo. Ary nalain’ireo koa ny fitafiany anankiray, izay tsy nisy zaitra, fa tenona iray ihany hatrany ambony ka hatrany ambany. Nifampiresaka izy ireo hoe: “Aleo tsy horovitintsika ity, fa andao isika hanao antsapaka hahitana izay hahazo azy.” Izany dia mba hahatanteraka ny Soratra Masina manao hoe: “Nifampizaran’izy ireo ny fitafiako, ary nanaovany antsapaka ny akanjoko.” Ary izany tokoa no nataon’ny miaramila". Nanao akanjo tsara i Jesoa Kristy, mifanaraka amin'ny lanjan'ny lanonana. Raha tsy mametraka fitsipika tsy voasoratra ao amin'ny Baiboly isika dia handanjalanja tsara ny fomba fitafiana (Hebreo 5:14).
I Jodasy Iskariota dia lasa ny lanonana. Izany no mampiseho fa lanonana io no tokony hankalazaina ihany amin'ny Kristianina mahatoky (Matio 26: 20-25, Marka 14: 17-21; Jaona 13: 21-30; 1 Korintiana 11:28,33)).
Ny lanonana ny fahatsiarovana lehibe dia voafaritra amin'ny fahatsoran'ny: "Raha mbola nihinana izy ireo, dia nandray mofo i Jesosy. Rehefa avy nivavaka izy, dia notapahiny ilay mofo ka nomeny ny mpianatra, sady hoy izy: “Raiso ity, ka hano. Ity no vatako.” Nandray kaopy koa izy, ka rehefa avy nisaotra an’Andriamanitra, dia nomeny azy ireo ilay kaopy, sady hoy izy: “Misotroa amin’ity ianareo rehetra. Fa ity no rako, dia ‘ny ran’ny fifanekena’ izay halatsaka ho an’ny maro ho famelan-keloka. Lazaiko aminareo anefa fa tsy hisotro intsony amin’itony vokatry ny voaloboka itony aho, mandra-pahatongan’ny andro hisotroako divay vaovao miaraka aminareo, ao amin’ny fanjakan’ny Raiko.” Tamin’ny farany, dia nivoaka nankany amin’ny Tendrombohitra Oliva izy ireo, rehefa avy nanao hira fiderana" (Matio 26: 26-30). Nanazava ny antony i Kristy noho izany lanonana, ny hevitry ny sorona, izay maneho ny mofo tsy misy masirasira, mariky ny tsy nisy ota vatana sy ny kapoaka, dia mariky ny rany. Nangataka ny mpianany izy hankalaza ny fahafatesany isan-taona amin'ny 14 Nisana (volana kalandrie jiosy) (Lioka 22:19).
Ny Filazantsaran'i Jaona dia mampahalala antsika ny momba ny fampianaran'i Kristy taorian'ity fombafomba ity, angamba ny Jaona 13:31 ka hatramin'ny Jaona 16:30. Ny vavaka farany nataon'i Jesoa Kristy dia ny Jaona 17. "Tamin’ny farany, dia nivoaka nankany amin’ny Tendrombohitra Oliva izy ireo, rehefa avy nanao hira fiderana" (Matio 26:30). Azo inoana fa ilay hira fiderana dia aorian'ny vavaka nataon'i Jesoa Kristy.
Tokony hanaraka ny modely navelan'i Kristy isika. Ny fankalazana dia tokony hankalazaina ny loholona, ​​pasitera, mpisoron'ny fiangonana kristianina. Raha atao any amin'ny fianakaviana ny lanonana, dia ny lohan'ny fianakaviana Kristiana no tokony hankalaza izany. Raha tsy misy lehilahy, ny vehivavy Kristiana izay handamina ilay lanonana dia tokony hofidiana amin'ny vehivavy tranainy (Titosy 2: 3). Amin'io tranga io, ny vehivavy dia tsy maintsy manarona ny lohany (1 Korintiana 11: 2-6).
Izay manomana io lanonana io dia hanapa-kevitra ny hampianatra ao anatin'io toe-javatra io, mifototra amin'ny fitantarana ny filazantsara, angamba amin'ny famakiana azy ireo amin'ny fanamarihana azy ireo. Hisy vavaka farany hivavahana amin'i Jehovah Andriamanitra. Azo atao ny midera an'i Jehovah Andriamanitra amin'ny fiderana, ary manaja an'i Jesosy Kristy Zanany.
Momba ny mofo, tsy maintsy atao tsy misy masirasira (Ahoana no hiomanana mofo tsy misy masirasira (lahatsary)). Ho an'ny divay, any amin'ny firenena sasany dia mety ho sarotra ny hahazoana iray. Ao amin'io tranga miavaka io dia ireo mpitondra no hanapa-kevitra ny hanolo azy amin'ny fomba mety indrindra amin'ny Baiboly (Jaona 19:34). Nasehon'i Jesoa Kristy fa amin'ny toe-javatra manokana dia misy fanapahan-kevitra miavaka ary ny famindram-pon'Andriamanitra dia hampihatra izany toe-javatra izany (Matio 12: 1-8).
Tsy misy fampahalalana ara-baiboly momba ny faharetan'ny lanonana. Noho izany, io no handamina io hetsika io izay hampiseho fitsaràna tsara. Ny hany manan-danja ara-Baiboly hevitra momba ny fotoana ny lanonana dia ireto manaraka ireto: ny fahatsiarovana ny nahafatesan'i Jesosy Kristy dia tsy maintsy hankalazaina "eo anelanelan'ny takariva roa": aorian'ny filentehan'ny masoandro ny 13/14 "Nisana", ary eo anatrehan'ny fiposahan'ny masoandro. Jaona 13: 30 Rehefa niala i Jodasy Iskariota, "Ary efa alina ny andro tamin’izay" (Eksodosy 12: 6).
Nataon'i Jehovah Andriamanitra io lalàna io: "Ary aza tehirizina mandra-maraina ny sorona atolotra amin’ny fetin’ny Paska" (Eksodosy 34:25). Nahoana? Ny fahafatesan'ny zanak'ondrin'ny Paska dia natao "eo anelanelan'ny takariva roa". Ny fahafatesan'i Kristy, ny Zanakondrin 'Andriamanitra, "ny fitsarana", koa "eo anelanelan'ny takariva roa", raha tsy mbola maraina, ary eo anatrehan'ny fiposahan'ny masoandro: "Ary tamin'izany ny mpisoronabe dia nandriatra ny fitafiany, ka nanao hoe: "efa niteny ratsy Nahoana isika no mbola mila vavolombelona Jereo ange efa renareo ny fitenenany ratsy Ahoana no hevitrareo?!.?" hoy izy ireo. "tsy saziana ny fahafatesana (...) Ary niaraka tamin'izay dia nisy akoho naneno, ary Petera nahatsiaro ny teny izay nolazain'i Jesosy izy, izany hoe: "mbola misy akoho maneno, dia handà ahy intelo" (Mat. 26: 65-75; Salamo 94: 20 "lamaody ratsy izy didy", Jaona 1: 29-36, Kolosiana 2:17, Hebreo 10: 1). Andriamanitra dia hitahy ireo Kristianina mahatoky manerana izao tontolo izao amin'ny alalan'i Jesoa Kristy, amena.